နှင်းတွေဖုံးနေတဲ့ အိမ်လေးမှာ အရမ်းပျော်နေတဲ့ အဆိုတော် ‘ခင်ဘုဏ်း’ရဲ့ပုံရိပ်လေးများ… – Nyi Ma Lay
တစ်ခေတ် တစ်ခါကအဆိုတော် မလေး ‘ခင်ဘုဏ်း’ ကတော့ ချစ် ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင် အားပေးမှုကို ယနေ့ အ ချိန်အထိ ရရှိထား သလို သူမကိုယ်တိုင် ကလည်း ဂီတအလုပ်တွေကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင် နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ချစ် ခင်ပွန်းနဲ့အတူ အခြေချနေထိုင် နေတဲ့ ‘ခင်ဘုဏ်း’က မြန်မာနိုင်ငံ ကိုတော့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အလည်ပြန်လာလေ့ ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
‘ခင်ဘုဏ်း’က ပြည်ပမှာ ရောက်ရှိနေပေမယ့်လည်း သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ချစ် ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်စေဖို့အတွက် လူမှုကွန်ယက်ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာပေါ်် မှ တစ်ဆင့် အမြဲမျှဝေပေးလေ့ ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းကပဲ ‘ခင်ဘုဏ်း’က သူမ နေထိုင်တဲ့ အမေရိကန်မှာ နှင်းမုန်တိုင်း ကျသွား ခဲ့ကြောင်း အသိပေးပြော ကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ နှင်းမုန်တိုင်း ပြီးသွားတဲ့ နောက်မှာတော့ ‘ခင်ဘုဏ်း’တို့အိမ်နဲ့ခြံလေး ကတော့ နှင်းတောထဲ ရောက်ရှိသွားသလို
နှင်းတွေ အပြည့်ဖုံးလွှမ်း နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ နှင်းတွေကြားမှ ပျော််််််််််််ရွှင်နေပြီး ဖြူဖြူဖွေးဖွေးနှင်းတွေနဲ့ အိမ်လေးက အရမ်းလှပြီး ချစ်စရာ အလွွွွန် ကောင်း နေတာကြောင့် ‘ခင်ဘုဏ်း’တစ်ယောက် ခြံထဲဆင်းပြီး စိတ်ကြိုက် အပြည့်အဝ ဓာတ်ဖမ်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
သူမကတော့ “နှင်းပင်လယ်ပြင်ထဲ အေးလည်းအေး ပျော် လည်းပျော် အိမ်ရှေ့ အိမ်ဘေး အိမ်နောက် တစ်ပါတ် လည် ဓါတ်ဖမ်းပါသည် ” ဆိုပြီး ခြံထဲမှာ နေရာ အနှံလှည့် ပတ်ကာ ရိုက်ကူးထားတဲ့
ပုံလေးတွေကို တင်ပေးထား တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ‘ခင်ဘုဏ်း’ကတော့ နှင်းတွေကြားမှာ အရမ်းပျော်ရွှင် နေတာဖြစ်ပြီး စတိုင်လ် ကျကျ ပို့စ်တွေ အပီအပြင် ပေး ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
ကဲ…. နှင်းတွေဖုံးနေတဲ့ အိမ်လေးမှာ အရမ်းပျော်နေတဲ့ အဆိုတော် ‘ခင်ဘုဏ်း’ရဲ့ပုံရိပ်တွေကို ချစ်ပရိသတ်တွေ အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်နော် ။ဖတ်ရှုအားပေးသော ချစ်ပရိသတ် ကြီးလည်းသာယာ ပျော်ရွှင်သောနေ့လေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Next post ငါ့အလှည့်ကျမှ “ကလေး အဖေ” တဲ့ လား? ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့အရွှန်းဖောက်ပြောပြ လာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ‘Ah Boy’